Soo ogow cidda nagu soo biiri doonta sanadkan' - Cuntooyinka giraangiraha
Soo ogow cida nagu soo biiri doonta Sanadkaan Roob Baabuurta Cuntada Northeast!
Calaamadee jadwalkaaga, maxaa yeelay dhacdooyinka xagaaga ee ugu habboon ayaa halkan yaal! Isku soo wada-duuboo Gaadiidka Cuntada ee Woqooyi-bari, ayaa waxaa kafaala qaaday Awoodda Guryaha & Khamriga iyo Metro Meals on Wheels, ayaa soo noqonaya sanadkii saddexaad. Isu soo baxa ayaa ka dhici doona Able Seedhouse & Brewery 3-10 pm Sabtida, July 14.
Dhacdadani waa u bilaash inay ka soo qayb gasho, iyadoo xargaha curcadaha lagu iibiyo $5. Dhammaan lacagaha laga soo ururiyo iibinta curcurka waxay taageeri doonaan Cunnooyinka Wheels iyo shaqadeena oo aan ugu geyno cunno nafaqo leh waayeelka bulshadayada. Akhriso si aad u aragto cida nagu soo biiri doonta dhacdadan weyn!
Baabuurta raashinka xambaara ee sanadkan nagu soo biiraya waxay kugu wareejinayaan aduunka oo dhan, iyadoo aysan jirin laba gaari oo raashin isku mid ah! Dhacdadani waa mid ka mid ah meelaha yar ee aad ka baaraandegi karto hibachi Japanese, cunnada Mediterranean, iyo tator-ku-dhiirrigelinta suxuunta dhammaantood hal meel. Qeybinta buuxda ee gawaarida xamuulka ee kujiraan madaxa Iskuxirka Rakaabka Northeast halkan.
Waxqabadyada Qoyska Ku Fiican
Labaad Hounds waxay keeneysaa eeyahooda la korsado oo carqaladeyn doona waxyaabaha xasaasiga ah ee lagu iibiyo qurxinta dhunkashada. Waxa kale oo jira soojiidasho cusub oo runtii xiiso leh oo imanaya Rally Rakaabka Rally. Muuqaal weyn oo la buufin karo, guriga boodboodka, rinjiyeynta wejiga, iyo ciyaar weyn oo loo yaqaan 'Connect Four' ayaa ka socon doonta isla markaana ka socon doonta munaasabadda si loo hubiyo in kaqeybgalayaasha da 'kasta ay heli doonaan waqti fiican.
Muusig toos ah
Lix ficil oo waaweyn oo maxalli ah ayaa masraxa ka saari doona masraxa sanadkan. Safka waxaa ka mid ah The Mighty Mofos, Waxyaabaha Cadhada Leh, Monica LaPlante, Federaaladii, Chemistry Set-Mpls iyo Catbath. Maxaa kafiican cunnooyinka macaan ee gawaarida cuntada ee maxalliga ah oo lagu lifaaqay qaar ka mid ah falalka ugu wanaagsan ee dhagaxa-iyo-duub ee ka yimaada magaaladeena?
Isu soo Baxii Baabuurta Northeast Bogga dhacdada Facebook waa meesha ugu fiican ee laga heli karo wararka dhacdooyinka iyo wixii macluumaad kale ah ee keenaya dhacdada. Waxaan rajeyneynaa inaan ku aragno Luulyo 14!
22 Juunyo 2018